musha / Specials Products / Universal Logo
SKU: pasi rose Category: Specials Products
DJ yevhisi yevhidhiyo mumutauro we Universal logo. Chiitiko chekare, zvinonyangadza zvinofungidzirwa zvakare kufungidzirwa ne DJ yako zita uye tsika. Iyi DJ video ndeyechokwadi kuti ibate. Yakakura sekutsvaga DJ pakutanga pakutanga kana kuti yakagadzirirwa, kuvhara husiku kana, kuvhara, pakati pekunze. Kufanana neyese DJ yedu inodonha uye DJ mavhidhiyo iyi inofanirwa, yakakwirira, High Definition video. BADZA tsika yaMurume kana yaMukadzi yakataura chikamu kuvhidhiyo ye $ 50 chete